DIALERS MAKA GAM AKPORO - A GAM AKPORO - 2019
Akwukwo ngwa ngwa
Fans of the game GTA 5 nwere ike ihu na njehie na-ezighị ezi jikọtara na faịlụ gfsdk_shadowlib.win64.dll - dịka ọmụmaatụ, ọkwa maka enweghị ike ịkwanye usoro a. Ozi dị otú ahụ pụtara na ọhụụ a kapịrị ọnụ mebiri ma na-achọ ka a dochie ya n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ. Njehie nwere ike ime na nsụgharị niile Windows nke GTA 5 kwadoro.
Ụzọ iji dozie nsogbu gfsdk_shadowlib.win64.dll
Nsogbu a mara ndị mmepe egwuregwu ahụ, ha kọwakwara ọtụtụ ụzọ isi merie ọdachi ahụ, iche iche maka Steam version nke Grand Theft Auto V na maka ndị zụrụ na diski ma ọ bụ ọrụ nkesa dijitalụ ọzọ. Chebara ha echiche.
Usoro 1: Lelee iguzosi ike n'ezi ihe nke cache (naanị Steam)
The gfsdk_shadowlib.win64.dll faịlụ nwere ike ijupụta na njehie n'ihi nkwurịta okwu nkwarụ ma ọ bụ na-emetụta omume nke software nje. Maka ndị ọrụ nke Steam ọrụ, ihe ngwọta kachasị mfe bụ ihe ndị a:
Mbanye Steam, gaa "Ọbá akwụkwọ" ma họrọ Nnukwu aka ụgbọ ala v.
Right pịa na aha egwuregwu ahụ, họrọ "Njirimara" ("Njirimara").
Na windo Njirimara, pịa taabụ "Faịlụ mpaghara" ("Faịlụ mpaghara") na họrọ "Lee faịlụ mpaghara" ("Chọgharịa faịlụ mpaghara ...").
Mgbe ihe onwunwe egwuregwu na-emepe, chọta faịlụ gfsdk_shadowlib.win64.dll na ya ma hichapụ ya n'ụzọ ọ bụla kwesịrị ekwesị.
Mechie nchekwa ma laghachi na Steam. Dee usoro nyocha ndebe nke cache - a kọwara ya n'ụzọ zuru ezu na ndu a.
Ihe ngwọta a bụ otu n'ime ihe kachasị mfe, ọ dịghị achọ ka a weghachite ya ọzọ.
Usoro 2: Lelee iguzosi ike n'ezi ihe nke faịlụ site na iji GTA V Launcher
Ọ bụrụ na ị na-eji disk ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na-abụghị Steam version nke egwuregwu ahụ, usoro a kọwara n'okpuru ga-enyere gị aka.
Chọpụta ebe GTA dị na desktọọpụ 5. Họrọ ya ma pịa aka na ya. Na nchịkọta nhọrọ, họrọ Ebe Njikwa ("Mepee ebe faịlụ").
Na ndekọ mepere emepe, chọta faịlụ ahụ. "GTAVLauncher.exe". Pịa ya na bọtịnụ òké aka.
Na menu, họrọ "Mepụta ụzọ mkpirisi" ("Mepụta ụzọ mkpirisi").
Họrọ ụzọ mkpirisi e kere eke, kpọọ mpaghara onodu ya nke ịchọrọ ịhọrọ "Njirimara" ("Njirimara").
Na windo na-esote, chọta ihe ahụ "Ihe" ("Echere"). Nke a bụ mpaghara ederede ọsọ ọsọ. Gaa na njedebe nke akara (tupu agwa "”"). Tinye ohere, wee tinye iwu ahụ-dozie.
Pịa "OK" ma mechie windo.
Gbaa ụzọ ụzọ mepụtara. Usoro nke ịlele faịlụ egwuregwu ga-ebido, n'oge a ga-ebudata akwụkwọ ndị a na-edeghị akwụkwọ ma degharịa ya.
Nzọụkwụ 3: Tinyegharịa egwuregwu ahụ site na ihicha ndekọ ahụ
Nhọrọ maka ndị ọrụ na ụzọ abụọ mbụ maka ihe ụfọdụ adabaghị.
Hichapụ egwuregwu ahụ site na iji ọnọdụ ọnọdụ ụwa niile maka nsụgharị Windows ma ọ bụ usoro Steam.
Hichaa ndekọ nke ndenye ochie na njehie. I nwekwara ike iji CCleaner.
Ihe omumu: Ihichapu aha na CCleaner
Wụnye GTA 5 ọzọ, na-ahụ ọnọdụ ndị a: ọ dịghị ihe mepere emepe, ọ dịkarịa ala mmemme emeela ka ọ dị ntakịrị na tray system, n'oge nbudata anaghị eji kọmputa rụọ ọrụ ọ bụla. Ihe a niile ga-ebelata ihe ize ndụ nke ọdịda ma ọ bụ nrụnye na-ezighị ezi.
Mgbe usoro a gasịrị, nsogbu ahụ ga-apụ ma gharakwa ịpụta.
N'ikpeazụ, anyị chọrọ ichetara gị gbasara uru ị na-eji iji ikikere enyere gị aka: na nke a, enweghi nsogbu nke nsogbu na-efu efu, ọ bụrụ na ha emee, ị nwere ike ịkpọtụrụ onye nkwado nke ngwa ngwa.